Kaarka cusub ee degenaanshaha | Somaliska
Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa bilaabeysa bixinta kaarar cusub oo degenaansho, ka bilaabata maalinta Jimcada ee taariikhdu tahay 20 bisha. Kaarkaan ayaa badali doona warqadii degenaanshaha ee dadka la siin jiray ama baasaboorka la saarijiray. Guud ahaan midowga Yurub ayaa laga bixin doonaa Kaarkaan cusub. Kaarka ayaa waxaa ku keydsansan warbixin ku saabsan milkiilaha sida sawirka iyo faraha. Kaarka cusub ayaan loo isticmaali karin aqoonsi ahaan balse waxa uu cadeynayaa oo keliya in qofka uu degenaansho ku leeyahay wadanka. Dadka loo ogolaaday degenaanshaha ayaa si toos ah loogu soo diri doonaa kaarka degenaanshaha guryahooda. Dadka hada haysta warqada degenaanshaha ayaan looga baahneyn in ay kaarka cusub qaataan ilaa uu ka dhaco baasaboorka ama ay dalbadaan baasaboor cusub. Markii la gaaro 2015 ayaa guud ahaan dadka oo dhan lagu qasbi doonaa in ay qaataan kaarka cusub. Ugu dambeyntii, qofka doonaya in uu u safro dibada ama gudaha Yurub ayay qabsan ku tahay in uu baasaboorkiisa iyo kaarkaan cusub isku qaato.
Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa bilaabeysa bixinta kaarar cusub oo degenaansho, ka bilaabata maalinta Jimcada ee taariikhdu tahay 20 bisha. Kaarkaan ayaa badali doona warqadii degenaanshaha ee dadka la siin jiray ama baasaboorka la saarijiray. Guud ahaan midowga Yurub ayaa laga bixin doonaa Kaarkaan cusub. Kaarka ayaa waxaa ku keydsansan warbixin ku saabsan milkiilaha sida sawirka iyo faraha.
Kaarka cusub ayaan loo isticmaali karin aqoonsi ahaan balse waxa uu cadeynayaa oo keliya in qofka uu degenaansho ku leeyahay wadanka. Dadka loo ogolaaday degenaanshaha ayaa si toos ah loogu soo diri doonaa kaarka degenaanshaha guryahooda.
Dadka hada haysta warqada degenaanshaha ayaan looga baahneyn in ay kaarka cusub qaataan ilaa uu ka dhaco baasaboorka ama ay dalbadaan baasaboor cusub. Markii la gaaro 2015 ayaa guud ahaan dadka oo dhan lagu qasbi doonaa in ay qaataan kaarka cusub.
Ugu dambeyntii, qofka doonaya in uu u safro dibada ama gudaha Yurub ayay qabsan ku tahay in uu baasaboorkiisa iyo kaarkaan cusub isku qaato.
sxb kaarka cusub ma waxaa loo soo dirayaaa qof waliba isagoo gurigiisa jooga ll aan u tegin laan socdaalka ,
mise waa in uu tago oo faro iyo sawir laga qaado ?
Dadka faraha iyo sawirka laga qaaday ayaa loo soo dirayaa kaarka. Dadka hada degenaanshaha haysta ee uu baasaboorka u saaranyahay uma baahna kaarka cusub ilaa uu ka dhaco baasaboorka.
asc dhaman asxaabta wac waan idin salamay dhamantii qaas ahaa jimcale sxb aniga su asha aan qabo waxey tahay hada waxaan leyahay dagansho basaborna waan leyahay ma waxaan ku qasbanahay in aan doonto kaar mise anigana sida dadka cusub ayu gurga iigu soo dhacayaa jab mahad sanidiin
May 18, 2011 at 10:28
asc waan idiin salaamey dhamaan bahda ku xeran somaliska.cm iyo dhamaan soomaali meel kasto ay joogaan gaar ahaan kuwa dalkan ila jooga hadii aan ka hadlo kaarka cusub kow waxaa is weydiin leh inaan isweydiino muxuu faiido inoo leeyahey ama qasaaro waa caqabad cusub oo nagu soo korodhey awal ayaan la daalaa dheveyney arinta famailada leysku diidey hadana waxey u muuqataa in aanan aadi karin afrika sidaa daraadeed aniga waxey ila tahey in soomalida qaar ay iska daayan iibinta baasaborkooda wax waliba waxey ku dhacayaan dadka cusub waxanse jimcaale weydiinayaa suaasha ah hadii kaarkan naloo soo tuuro ileyn ma diidi karnee aaditaanka caruurteena miyuu naga horjoogsanayaa hadii jawaabta haa ay tahey aniga kow intuu iga dhicin ayaan xabii aan ka imid kula noolaanayaa caruurteyda wad mahadsan tihiin jawaab ayaan kaa sugayaa jimcale thanks alot
May 18, 2011 at 12:09
ILAAHEEY WAXAAN KABARYAA MEESHA QEER I DIINKUJIRO ILAAHEEY HANII WAAWAJIYO AAMIIN WAX OGAATIIN WAX WALBA UN UU KUJIRO GACANTA I LAAHEEY
May 18, 2011 at 12:35
asc walaall wandin wadalamay kadib jimcale waxan qaba su al hoyo kaligedan ahay meshana jogta wiil yaranhaysta baspor uma dalbin wlai aniga haysta kaliya waxan maqlay basporka walajoojin maxaakajira karkan sobaxayse cunugu maqadanaya uu isnah asc jawab wlala nasoosii fadlan adoo rali ah
May 18, 2011 at 12:46
Jimcaalle waa kumahdsanthy aqbaarta sida aa noogu soo gudbisid
Asc dhamaan, jimcaale iyo bahda website wa u mahadcelinayaa..waxan la yabay somalida halkey ka keenen in passborka la jojiyey. kaarkan cusub shaqo kuma lahan passka ee waa waraaqda sharciga lagugu siiyey oo laga dhigay kaar, wana kaar yurub dhan ka jiri dona..dadka hada sharciga qaatay muhiim ayay u tahay inay qaatan karkas hadi kale wey adagtaahy inay safraan maxa yeelay waxa ka maqan cadeynti aheed in wadankan sharci ku leedahay. qofka pass hesta hada wa u safri kara dhib l,aan maxa yelay ogolanshaha sharciga passka ayu ku dhax yaala..walaalayaal iska daaya dadka masaakinta aanan garaneyn luqada ina jahwareerisan idinko jaahil ka ah wax ka socda wadankaan..qofki su aal qaba ha ula tago handläggarehisa sas aya ku wanagsan. ha dhagaysanina waxa fadhi ku dirirka lagu sheekesto ee beenta ah..wa mahdsantihin….
Omar: wax uu kaa horjoogsanayo lama arko kaarkaan cusub waxaa keliya lagu bedalayaa warqadii deganaanshaha ee baasaboorka la saari jiray.
Hamdi: Xamdi baasaboor la joojiyay ma maqal. warkaas meel laga keenay ma ogi.
May 18, 2011 at 19:53
Jimcaale sxb aadbaan ugu mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad noola socodsiiso hadba wixii soo baxa ee khuseeya umada somaliyeed, waxaan ka mid ahay dadka sharcigani qabtay ee aan wali dalban ba baasaboor markaa maalmahanba dadka horey u haystay baasaboorada ayaa ku sheekaynayay in la joojiyay basabooradii la siin jiray somalida, markii aan doontay ee aan goobtii tagayna waxaan kala kulmay wixii la sheegayay waxaan u dhawayn kaliya daganaanshaha in laga dhigay kaadh laf ah sida leega qof kastana la siin doono oo sharci daganaansho ah haysta. aadbaad ugu mahadsantahay jimcaale
fardowsa k says:
Asc jimcaale waxaan ku weydiinaa walaal waxaad tiri laga bilaabo bishan 20keeda qofkii asagoon weli u soo dhicin safra ma dhib bey ku tahay
Fardowsa haddii aad hada haysato baasaboorka Främlingspass isaga ayay kuu saarantahay degenaanshaha oo uma baahnid kaarka cusub. Haddii aadan haysan baasaboorkaas sidee u safree?
Waxaan filayaa haddii aad haysato wax cadeynaya in aad degenaansho ku leedahay Sweden in aysan wax dhib ah kugu noqoneyn. Hada xitaa Denmark way xiratay xuduuda oo beryahaan Yurub waxay wadaan xuduud kala xirasho marka kuma talinayo in baasaboor iyo deganaansho la’aan la safro.
Jamcaale sxb salaan qaali ah kadib.
sxb su aal lacag miyaa xaraynta kaarku mise waa bilaash?
jimcale sxb 7 bari kahor ayaan xaraystay baasaboorka marka kaarkana madalbanayaa mise sidaas ayaan ku helayaa 2 badaba ii jawaab adoo raali ah.
tankale kaarku malacag baa mise waa bilaash.asc wallaakey
May 19, 2011 at 12:04
Aden kaarka in uusan lacag ahayn ayaan filayaa, meel lacag lagu sheegayo ma maqal balse waan soo xaqiijin doonaa. Kaarkaan dalab uma baahna haddii farahaaga ay yaalaan migrationsverket si toos ah iyaga ayaa u soo diraya. In uu adiga oo baasaboor dalbaday kuu soo dhacayo iyo in kale ma hubo.
Jimcaale kaarka waa lacag aniga ayaa la i soo tuuray waxaana la iga qatay 2250 ma aqaan lacagtaas in uu baasaboor la socdo iyo in kale marka sidaa ula soco mahadsanid